October 6, 2016 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments
ताप्लेजुङ , असोज २० । यो वर्षको अलैंचीको उत्पादन सुरु हुन नपाउँदै पूर्वमा अलैंचीको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ । रोग–किराको प्रकोपले समस्यामा परेका कृषक मूल्य घटेपछि थप समस्यामा परेका छन् । अलैंची बिक्री गरेरै दसैं–तिहारका लागि खर्चको जोहो गर्नुपर्ने समयमा मूल्यमा आएको उतार–चढावका कारण अलैंची उत्पादक कृषक समस्यामा परेका हुन् ।
गत वर्ष प्रतिमन रु. ९७,०००/- रूपैयाँमा बिक्री भएको अलैंची यो वर्ष प्रतिमन रु. ६२,०००/- हजारमा झरेको छ । उत्पादन र मूल्य घटेकाले किसानको आर्थिकस्तरमा मात्र नभएर जिल्लाको अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्नेछ ।
भारत र पाकिस्तान लगायत मुलुकबाट माग घटेपछि गत वर्षभन्दा मूल्य घटेको किसान र व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा ठूला व्यापारीले मिसावटयुक्त अलैंची निकासी गरेका कारण आफूहरुले भनेजस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न नपाएको कृषकको गुनासो छ ।
← मासु खानु अघि जान्नुपर्ने कुरा
सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरी सरकारले खोल्यो जलविद्युत कम्पनी →
समाजवादी जनता पार्टीको चुनावी प्रचार-प्रसार तीब्र
May 11, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0
September 5, 2016 साइन्स इन्फोटेक Comments Off on नेपाल आईपुगे एपोलो ११ का अन्तरिक्ष यात्री एल्ड्रिन
December 7, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0